Ubuninzi beNkukhu yePix Pox China Manufacturer
Iimveliso zeeMveliso zeMpilo,Imveliso eQinisekayo yeMpilo ePhakamileyo,Amachiza afanelekileyo Amashishini Ukukhusela okufanelekileyo
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso zeeMveliso zeMpilo,Imveliso eQinisekayo yeMpilo ePhakamileyo,Amachiza afanelekileyo Amashishini Ukukhusela okufanelekileyo
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Bulk Final > Ubuninzi beNkukhu yePix Pox
Ubuninzi beNkukhu yePix Pox
 Ubuninzi beNkukhu yePix Pox
Amanqanaba amabini okugonywa angama-90% asebenzayo ekukhuseleni inkukhu. Xa ugonywa, uyazikhusela kunye nabanye kwindawo yakho. Oku kubaluleke kakhulu kubantu abangenako ukugonywa, njengalezo ezinesistim sobuthathaka okanye abasetyhini abakhulelweyo.
Abanye abantu abagonyelwe ukukhusela inkukhu basenokufumana isifo. Nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo kulukhuni kunye ne-blister embalwa kunye ne-fever encane okanye ayikho. Thetha kunye neengcali zonyango lwakho ukuba unemibuzo malunga nokugonya kwe-inkukhu.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Iimveliso zeeMveliso zeMpilo , Imveliso eQinisekayo yeMpilo ePhakamileyo , Amachiza afanelekileyo Amashishini Ukukhusela okufanelekileyo , Iimveliso zeeMveliso zeMveliso zeMveliso , Iimveliso zeMvelo eziNyelweyo , Iimveliso eziQinisekileyo zeMpilo , I-Gelatin Iimveliso zeeMveliso eziVimbelayo , I-Gelatin Iimveliso zeZibalo zeMpilo